February 10, 2021 – Healthy Life Journal
ဘယ်လိုအတိုင်းအတာဆိုရင် သွေးတိုးရှိတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါသလဲ . . .
—–၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. သွေးပေါင်က ဆေးခန်းမှာတိုင်းတာနဲ့ အိမ်မှာတိုင်းတာ အပြောင်းအလဲရှိတော့ ဘယ်လိုအတိုင်းအတာဆိုရင် သွေးတိုးရှိတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါသလဲဆရာ။ A. သွေးတိုးတယ်ဆိုတာ သွေးပေါင်က ၁၄၀/ ၉၀ mmHg နဲ့ အထက်ရှိရင်...